SABABAHA, ASTAAMAHA, KA HORTAGGA IYO DAAWEYNTA BARADHO KA TIMAADA DABAYSHA GOOR DAMBE - BARADHADA
Dheecaan dabacsan (ama caleemaha bunka) waa cudurada ugu caansan ee dalagyada khudradda, oo ay ku jiraan baradhada. Wakiilka keena cudurka waa fungus. Maqaalkani waxaad baran doontaa sababaha ugu dambeeyay ee baradhada iyo tallaabooyinka xakameynta ee hadda jira ee loo isticmaalo cudurkan.
Sababaha sonkorta dabaysha goor dambe
Sababta ugu weyn ee horumarinta blatter goor dambe ee baradho ah ayaa la xiriirta cudurka loo yaqaan "pathogen" loo yaqaan oomycetetaas oo loola jeedo fangaska hoose. Cudurku wuxuu keenaa si dhakhso ah, maadaama xilliga maskaxda ee masagada ay tahay 3 ilaa 15 maalmood.
Ilaha ugu muhiimsan ee cudurku waa haraaga dalagyada khudradda iyo ciidda, kuwaas oo horeyba u qaadeen fangaska fungal.
Heerkulka ugu wanaagsan ee horumarinta cudurka wuxuu gaari karaa 25 ° C, qoyaanka hawadu waa 90%. Inta badan cudurku wuxuu ku faafaa marka la beerto khudaarta dhul ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, kala duwan sida baradho ah, sida "Annaga of Zhukov", wuxuu leeyahay diidmo aad u sareeya ee dabaylo goor dambe.
Ma taqaanaa? Baradhadu waxay ku jiraan ilaa 80% biyaha.
Main Calaamadaha ugu horreeya cudurada waxaa loo tixgeliyaa:
dhibco mugdi ah caleemaha;
dhibco madow oo ku yaal afargeesada;
Bloom caddaan ah on underside ee xaashida.
Haddii aad ku aragto calaamadaha waqtigaa, waxaad heli kartaa waqti aad ku kaydiso baradho cusub iyadoo la adeegsanayo diyaargarow gaar ah dabaysha goor dambe.
Bannaanka Novice waxay u badan tahay inuu xiiseynayo inuu akhriyo ku saabsan farsamooyinka kala duwan ee baradho sii kordhaya: Dutch, hoos caws, beerto xilliga qaboobaha.
Marxaladda labaad ee cudurka, taas oo ah, ka dib dhowr maalmood ka dib, caleemaha waxay bilaabaan inay caleen iyo qalajiyaan, iyo dhibco adag u muuqdaan on digriiga.
Marxaladda ugu dambeysa, dhirta ayaa dhimata ama lumisa bandhigeeda ama dhadhanka, ama waxay noqon kartaa mid aan ku habooneyn gaadiidka, wax soo saarka iyo kaydinta.
Hababka khatarta ah ee dabaysha goor dambe
Xitaa haddii aad u maleyneyso in beertaada ay ku filan tahay in la ilaaliyo, waxaa wanaagsan inaad ilaaliso naftaada oo aad hubiso ilaalinta baradhada iyo dalagyada kale ee khudradda ka soo daahay dabaysha.
Tallaabooyin ka hortag ah ayaa si toos ah loogu dabaqayaa. ka hor intaan la dhicin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad bixiso wax soo saarka caafimaadka leh oo aad dooratid noocyo u adkeysanaya ee xanuunka.
Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in laga reebo haraaga ka soo daggay dhulkii hore ee dhulka, tan iyo markii jirkii hore uu yahay isha cudurka. U hubso inaad taageerto wareegga dalagga si looga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka.
Waa muhiim! Marka aad dooranayso goob loogu talagalay beeritaanka xulashada meelaha leh qoyaan yar.
Beerta qaar ka mid ah ayaa lagu talinayaa in ay goosashada hore gooshi, ugu fiican cimilada roobka. Miraha la soo ururiyey ayaa markaa lagu talinayaa in lagu meeleeyo meel qallalan ah si ay u bislaadaan. Ha beeran khudaarta midba midka kale. Taas awgeed, cudurku wuxuu horumariyaa si dhakhso ah. In ka badan waa in la isku dhejiyaa fogaanta inta u dhaxaysa dalagyada khudradda. Oo sidoo kale codso hilling si loo ilaaliyo digriiga waxyeello.
Dillaaca dabiiciga ah - weerar, saamaynaya ma aha oo keliya baradhada, laakiin sidoo kale dalagyada kale: yaanyada, basbaaska, ukunta.
Marka bacarimiso dhirta, waa inaadan xumayn isticmaalka bacriminta nitrogen, tanina, inkastoo ay kordhiso dhalidda, laakiin weli waxay kordhisaa heerka infekshanka. Bedelkii nitrogen, waxaa fiican inaad isticmaasho potassium ama copper.
Mashiinka sidoo kale waxay u taagan tahay doorasho ilaalin wanaagsan. Cunto noocan oo kale ah ee baradho ah laga bilaabo kulaylka goor dambe waxaa loo isticmaalaa marar badan, iyo nidaamyada difaaca ayaa kala duwanaan kara: waxaad isticmaali kartaa caano, tincture, Trichopol, iodine, xal daciif ah ee naxaas sulfate ama tincture on superphosphate.
Waxyaalaha caanuhu waxay abuuraan filim difaac ah caleemaha, oo ka hortagaya caabuqa, iyo iodine, superphosphate iyo vitriol lagu qaso bacriminta potassium maaha oo keliya ilaalinta, laakiin sidoo kale quudinta foliar.
Badeecooyinka baradhada ee ka hortagga iyo xakamaynta dabaysha goor dambe
Waxaa jira daaweyn badan oo loogu talagalay dabeysha goor dambe ee baradhada, kuwaas oo loo isticmaalo marka fungus uu ku dhaco inta badan dhaqanka khudradda.
Dad badan waxay isku dayaan inay ilaaliyaan iyaga oo dooranaya digriiga saxda ah ee beerto si ay u beerto iyo waqtigooda haraaga dalagyada xididka. Si kastaba ha noqotee, tani mar walba waxtar ma leh.
Xaaladdan marka hore, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso dushooda leh fungicide nidaamsan.
Waa muhiim! Marka dushooda ay gaaraan height ah 30 cm, buufinta ayaa la sameeyaa.
Waayo ku buufin isticmaal hal-boqolkiiba Bordeaux dareeraha ama copper sulfate.
Ka hor inta ubax, dalagyada xididada waxaa lagu daaweeyaa Ecosil ama Appin. Wixii ka soo horjeeda cudurku wuxuu isticmaalaa "Silk". Ka dib marka la qaado tallaabooyinka khasabka ah, kadib dhowr wiig ka dib, khudaarta waa in lagu baaraandego Efal ama Ditan M-45 fungicides. Iyadoo guuldarro xoog leh, isticmaal "Ridomil Gold" ama "Oxy".
Ka dib markii ubax, baradho waxaa lagu daaweeyaa macnaha "Bravo", iyo marxaladda dillaac of digriiga isticmaal "Alufit".
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho kiimikada, markaas bannaanka qaar ayaa lagula talinayaa inaad isticmaasho hababka dadweynaha. Caanaha badanaaba la isticmaalo oo lagu daro dheecaanka iodine ama 10% lafdhabarta.
Ma taqaanaa? Waxaa jira matxafyo badan oo baraf ah oo adduunka ah.
Hadda oo aad ogtahay waxa dhirta baradho waa, sida ay u muuqato iyo nooca daaweynta aad u baahan tahay inaad siiso xididada, waxaad si ammaan ah u bilaabi kartaa si aad u diyaariso sariiraha beeritaanka mustaqbalka.